Hydronephrosis - ubulwelwe lapho kukhona ukunwetshwa izinkomishi kanye ukhalo kwezinso. Ukugula iqhubeka, esikhiqiza thinning of kwezicubu kwezinso, okubangela ukwephula imisebenzi eyisisekelo. Lapho sitholakele izinso hydronephrosis ukwelashwa wenziwa ngaphansi kweso lwezokwelapha. Lesi sifo kwenzeka ephula outflow ka umchamo lendebe ukhalo kwezinso. Kanyekanye kwegazi ngeziphambeko zenzeka ezicutshini kwezinso. Uma kulesi sifundazwe kukhona ezinwetshiwe ureter, kulezi zimo bathini mayelana ureterohydronephrosis.
Ngokuvamile, izinso hydronephrosis, izimpawu zazo ziyahlukahluka ngegalelo ezahlukene, ebonakaliswa abesifazane nezingane. Lesi sifo sehlukaniswe eyinhloko, kuphakama lapho kwezinso ipheshana engenhla urinary, futhi yesibili, okuyinto eyenzeka ngenxa yobunzima obabangelwa izifo ezithize.
Ngokuvamile ukuthuthukiswa hydronephrosis kwenzeka kancane kancane futhi kancane. Ukwelashwa nokuvikelwa lesi sifo ukuze uqede zonke izimbangela zokuhlupheka ngeziphambeko. izindlela okulondoloza ukunikeza yi wayempofu ngenxa nokungasebenzi ngendlela yayo. Basuke kuphela esetshenziswa okudambisa izinhlungu ezihambisana izinqubo ukuvuvukala kule izinso, kanye okudambisa izimpawu nokwehluleka ukusebenza kwezinso kanye nokunciphisa blood pressure.
kokungenela Steel Kwenziwa ezimweni lapho nokuvulwa kwezinso ukubuthwa uhlelo. Okokuqala, uhlobo kanye nenani indlela ukusebenza, okumele kwenziwe kabusha izitho, ngokuya ngomthombo, okubangela isifo. Lezi zici futhi kungathinta Izibikezelo yomuntu ukutakula.
Uma kwenziwa izinso hydronephrosis, ukwelashwa wenziwa izinqubo laparoscopic. Lokhu cutting edge izindlela ezidumile ukususa lesi sifo ukuthi babe invasiveness ongaphakeme. Nokulahlekelwa izinso umsebenzi imikhiqizo yabo kususwe, ngaphandle kwalokho kungase kube yezinkinga ezihlukahlukene. Ngokuvamile, ngaleyo ndlela isebenze nasebekhulile.
Hydronephrosis izinso ngesikhathi sokukhulelwa kungaba azimisele ngisho ngesikhathi esanda kuqala. Ngokuvamile, abesifazane nalesi sifo kukhona ubuhlungu zibuthuntu elalimbelesele, onikeza ukuze imbilapho. Kulesi ukugula kwenzeka nokugcinwa urinary. Uma kukhona lolu hlobo umuzwa - ningatatazeli ucabange ngalokho okungase kwenzeke lokuzalwa yisisu noma besebancane. Okokuqala, kufanele abone udokotela uma inquma umzimba kakhudlwana uzobe ukuthi nginesifo izinso hydronephrosis.
Ukwelashwa futhi sitholakele isifo zisuselwa ekuhlaziyweni umchamo. Kodwa qinisekisa ngokuphelele uphethwe kungenzeka kuphela ngosizo ultrasound. Kumele kukhunjulwe ukuthi-X-ray Ukuhlolwa indlela kanye nendlela urography excretory abesifazane abakhulelwe contraindicated.
Ingozi eyinhloko hydronephrosis kuyinto yezinkinga kungenzeka ukuthi kuholele ukuthuthukiswa pyelonephritis, njengoba ekukhulelweni ibonakala ingozi yokutheleleka anda. zokugula Pediatric ngokuvamile kubangelwa izizathu yokwakheka, yiba umlingisi isegazini. Lesi sifo ihlonzwe ngisho ezingenzeka embungwini, ngokuba esibelethweni. Uma lesi sifo utero ayibonwa, ke elibonakala khona igazi umchamo.
Ukwaba kanye nezinye izici, eqinisekisa hydronephrosis izinso. Ukwelashwa kuvame ukuhlotshaniswa ukuhlinzwa. Kodwa ngenxa yokuntuleka kwezinhlelo ezibanzi yezinkinga isifo zingalawulwa. Wawuyini umgomo wazo wokuqala ezimweni ezinjalo ukuqinisekisa futhi uqede zonke izimbangela zokuhlupheka hydronephrosis. Ngokwesibonelo, uma isifo lihlotshaniswa ezinso, kufanele bahlukane ngokushesha.
Ezinganeni, izimpawu ziyabonakala njengoba ubuhlungu besisu, imfiva, ukubukeka izimila esikhulu ngaphakathi komgodi ongaphakathi kwamathumbu.
Simila we ubende: Izimbangela, Izimpawu, Ukwelashwa
Kungani kukhona amabala entanyeni? izindawo Red: indlela yokuphatha?
Iyini ubuhlanga: ukubonakaliswa kwalo nomlando wezokuthuthukiswa
Ukuze uthole echibini we Chelyabinsk esifundeni kungcono ukuya uphumule?
Ososayensi Famous Ukraine: umnikelo oya emhlabeni yesayensi
Dala isixha uswidi ngezandla